CTO: Ngbanwe mgbanwe nke nkà dị mkpa iji mee ka asọmpi ndị njem Caribbean na-asọmpi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » CTO: Ngbanwe mgbanwe nke nkà dị mkpa iji mee ka asọmpi ndị njem Caribbean na-asọmpi
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The nkà mgbanwe dị mkpa iji mee ka ndị njem nlegharị anya nke Caribbean ga-abụ isi okwu nke mkparịta ụka mgbe ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ mmadụ si n'akụkụ dị iche iche gbakọtara maka Ismtù Njem Caribbean Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Caribbean (CTO) Nzukọ nke Ọha na-eme njem nlegharị anya nke mmadụ nke 10.
Nzukọ a, nke a ga - eme site na 20-22 May, 2020 na Nevis n'okpuru isiokwu: "Na - agagharị na Usoro Na-esote nke Caribbean Tourism", na-ahazi ya na mmekorita ya Ndị njem nlegharị anya Nevis.
Sharon Banfield, ndị CTO kwuru, sị, "Dịka ọdịnihu ọrụ ga-apụta n'ime ụlọ ọrụ njem njem zuru ụwa ọnụ, ihe ịma aka nye ndị were mmadụ n'ọrụ iwebata, ijigide ma kwalite ndị ọrụ ịgbakwunye uru ha bara ga-abụ ihe dị oke mkpa dị mkpa maka ịchụso azụmaahịa njem njem na-aga nke ọma." onye nduzi nke nchịkọta akụ na mmepe. “Mana enwere ndọkụrịta na-agagharị n'etiti ụbọchị ugbu a na ọdịnihu achọrọ. Ihe ndozi a bụ ụlọ ọrụ ndị njem na-abanye ụwa nke nka na amamịghe. N'ọtụtụ mpaghara gburugburu ụwa, a na-ezo aka na ya dị ka mgbanwe nkà. ”
Canadian Joe Baker, onye isi nke thelọ Akwụkwọ nke Ọbịa, Tourism na Culinary Arts na Centennial College na Toronto, na onye otu ndị isi na-ahụ maka njem nleta HR Canada, ga-ewepụta n'okwu a.
Baker, onye ọkachamara na-eduga ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ego, ga-eduzi ihe ngosi mmekọrịta banyere otu Canada si ekwu okwu banyere nnukwu ọrụ ndị njem na-eme njem site na imepụta usoro nka na ikike maka ndị were ọrụ na ndị nkuzi iji nweta na itinye ego iji wulite ọganihu.
"Oge ọhụụ nke nkà na ikike dị anyị n'aka dịka ndị ọrụ na-achọ ịchọta ma wuo onye ọrụ na-arụsi ọrụ ike na nke nwere ike ghara ịbata n'ọnụ ụzọ nwere agụmakwụkwọ na ahụmịhe dị mkpa," Banfield kwuru. “Ohere dịịrị ndị were ọrụ ịchọpụta, were ma nweta akọ nka achọrọ maka ndị ọrụ ọhụụ ka ha nwee ọganiihu ma nye aka na nkwado na uto nke njem na ahịa na-asọ asọmpi na-arịwanye elu.”
Baker, onye nwere ogo mmụta na agụmakwụkwọ na Mahadum Toronto, ọkachamara na onye ndu agụmakwụkwọ ka elu, bụ onye na-enye aka mgbe niile ile ọbịa na njem ụlọ ọrụ ndị njem na akwụkwọ mgbasa ozi. O mepụtala ebe a pụrụ iche iji kwado maka imekọ ihe ọnụ n'etiti agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ iji wuo ndị ọrụ na-eme njem nleta na-agagharị. Na Jenụwarị nke 2020, o nyefere ngosipụta siri ike na Impact Sustainable Travel and Tourism Conference na Victoria, British Columbia, Canada na-akọwapụta ihe ịma aka na usoro achọrọ maka agụmakwụkwọ iji nye aka n'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ njem nleta n'onwe ya.
Ihe ngosi ya na ogbako a ga - abụ otu n’ime ọtụtụ iji nyere ndị were mmadụ n’ọrụ na ndị ọrụ aka ọrụ aka ịghọta etu ha ga - esi wee gbanwee echiche ha site n’agụmakwụkwọ na ahụmịhe rue na nka na nka. Ọ ga - ama echiche dị iche iche aka ma nye ndị were ọrụ nghọta gbasara omume dị mkpa n'ime ebe ọrụ nke ga - enyere aka na nzukọ na ụlọ ọrụ ọganiihu.
agbasa ozi ọma Ismtù Njem Caribbean Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Caribbean